Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Dalka Iraq oo Qabsaday Garoonka Diyaaradaha ee Muusil.
Ciidanka Dalka Iraq oo Qabsaday Garoonka Diyaaradaha ee Muusil.
Posted by ONA Admin	/ February 25, 2017
Masuuliinta Ciidanka Iraq ayaa sheegay in ciidamadooda uu Mareykanka taageero ay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada Mosul oo ay kooxda Daacish (ISIS) maamuleysay tan iyo sanaddii 2014.
War lagu qoray shaashadda taleefishinka dowladda Iraq ayaa lagu sheegay in Ciidamada jawaabta deg degga ah iyo booliiska federalka ay si buuxda gacanta ugu hayaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Mosul. Saraakiisha ayaa shalay sheegay in ciidamada ay sidoo kale dib u qabsadeen saldhig ciidan oo ku dheggan garoonka, ayna gudaha u galeen xaafadaha Mosul, markii ugu horreysay muddo bilo ah.
General Raid Shakir Jaudat ayaa sheegay in ciidamada Iraq oo diyaarado iyo duqeymo culus ay taageerayaan ay dhowr dhinaca kasoo weerareen garoonka. Sarkaal kale oo Iraqi ah ayaa sheegay in dagaalyahanada Daacish ay qaraxyo is-miidaamin ah oo baabuur loo adeegsday kala hor yimaadeen ciidamada Iraq.
Waxa uu sheegay inuu gaadhay khasaare dhowr iyo toban ah, hase yeeshee badankood ay yihiin dhaawacyo fudud. Dagaalka xoraynta magaalada Muusil ayaa socday mudo dhawr bilood ah. Waxaa khasaare balaadhan uu soo gaadhay labada dhinac ee isku haya dagaalka.